शैक्षिक क्षेत्र सुधारौं – Yug Aahwan Daily
शैक्षिक क्षेत्र सुधारौं
युग संवाददाता । ७ भाद्र २०७८, सोमबार १४:५१ मा प्रकाशित
कर्णाली मानव विकास सुचांकमा कमजोर छ । यसो हुनुको पछाडि धेरै कारण होलान् । तर मुख्य कारण भनेको कमजोर शैक्षिक अवस्था नै हो । समाजलाई विकासको बाटोमा कुदाउन र नागरिकलाई चेनना भर्न शिक्षा अनिवार्य छ ।
तर कर्णालीमा शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच दुबै कमजोर छ । आर्थिक अभाव, भौगोलिक विकटता र सामाजिक चेतनाका कारण पनि यहाँका नागरिकले शिक्षा पाउन सकेका छैनन् । देशको संविधानमा त सबै नागरिकलाई शिक्षा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
तर यहाँका धेरै नागरिक आज पनि शिक्षाको त्यो ज्योति पाउनबाट बञ्चित छन् । साविक कर्णालीका दुर्गम बस्तीहरुमा अवस्था अझ दयनीय छ । एक छाक खानकै लागि नागरिकले संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अधिकांश परिवार रोजोरोटीका लागि सहर र भारतमा मजदुरी गर्न बाध्य छन् ।
उनीहरुका सन्तानले चाहेर पनि विद्यालय जान सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको साक्षर कर्णाली अभियान कसरी प्रभावकारी बन्न
सक्छ ? प्रदेश सरकारले पछिल्लो दुई वर्षदेखि कर्णालीलाई साक्षर बनाउने अभियान थालेको छ ।
तर पनि यहाँका धेरै नागरिक सामान्य लेखपढ पनि गर्न नजान्ने अवस्थामा छन् । धेरै नागरिक हस्ताक्षरको साटो औंठाछाप अर्थात ल्पाप्चेको भरमा छन् । उनीहरुलाई हस्ताक्षर गर्न सक्ने नबनाउँदासम्म प्रदेशलाई साक्षर बनाउन सहज छैन । उमेर ढल्केका कारण पनि उनीहरुका लागि संचालन हुने प्रोढ कक्षाहरु संचालन गर्न कठिन छ ।
अर्कोतर्फ बालबालिकाहरुलाई पनि विद्यालयमा भर्ना गर्न, नियमित गर्न र बिचमै विद्यालय छाड्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि धेरै चुनौतीहरु छन् । यसले पनि साक्षरता अभियानमा चुनौती थपेको छ । यसकारण पनि सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा लैजाने नीति र कार्यक्रम राज्यले संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारको सहकार्य र सक्रियता आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो समय कोरोना महामारीले शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । विद्यालयहरु संचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । कर्णालीमा वैकल्पिक विधि र उपाय पनि प्रभावकारी छैन । यस्तो अवस्थामा कर्णालीलाई कसरी साक्षर बनाउने ? चुनौतीहरु अवश्य छन् ।
तर पनि ति चुनौतीलाई छिचोल्दै कर्णालीलाई साक्षर घोषणा गर्ने सपना भने अधुरै रहन दिनु हुँदैन । यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले अहिलेबाटै यसमा ध्यान दिनु पर्दछ । कर्णालीलाई साक्षर बनाउने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहले गाउँमा रहेका निरक्षरहरुलाई साक्षर बनाउनका लागि सोही स्थानमा रहेका साक्षर जनशक्तिलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
परिवारभित्रकै साक्षर जनशक्तिले निरक्षरलाई अनिवार्य साक्षर गरेमात्र सरकारी सुविधा पाउने कडा नीति तय गरेमा पनि कर्णाली साक्षर बनाउने अभियान सफल हुन सक्छ । यस्तै कोरोना महामारीको बेलामा पनि वैकल्पिक विधि अपनाएर, आर्थिक रुपमा सवल बनाएर स्थानीयलाई साक्षरता कक्षामा सहभागि हुने अवस्था पनि सिर्जना गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनै पर्दछ । अनिमात्र यहाँको शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्दै गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ ।